Kedu otu esi amata ọkwa ụgbọ ala? Kedu otu esi amata ọkwa ụgbọ ala? - LFOTPP
Kedu otu esi amata ọkwa ụgbọ ala?
Na ụdị mmeme nke anyị na-ahụkarị n’ụbọchị, site na obere rue nnukwu: Micro-AOO, Obere-AO, kọmpat-A, Ọkara-B, Ọkara-Nnukwu-C na Nnukwu-D.
Na ọkwa kwekọrọ, na mgbakwunye na ụgbọ ala, ndị na-emepụta izugbe nwere ike ịmalite ụdị usoro dị ka SUVs kọmpat na MPV nke nwere obere. Na mgbakwunye, ụfọdụ ụgbọ ala egwuregwu, ụgbọala siri ike n'okporo ụzọ, na ụgbọ ala ebumnuche pụrụ iche ga-azụlitere onwe ha.
Passat B6 bu akara nke mbu nke Sitat nke Volkswagen AG mere. Ọ bụ naanị ụgbọ ala nke enweghị ike ịnọchite nke ọkwa ụgbọ ala ahụ.
Nke ụlọ ọrụ ndị German mere kesaa klas nke ụgbọala ahụ, mba niile jiri nke nta nke nta mata ya. Na mmepe nke oge, usoro nhazi ọkwa mbụ maka ụdị ụgbọ ala ejirila nwayọọ wee gbanwe ma gbanwee. A na-ekewa akara mmụta ndị akọwapụtara dị ka mgbatị ụkwụ nke wiil,ogologo na nchụpụ, wdg, nke a kọwara n'ụzọ zuru ezu n'okpuru:
1, Obere ụgbọ ala - ọkwa AOO
Wheelbase nke klas ụgbọ ala a nwere n'etiti 2.0 na 2.3 mita, ogologo ahụ ụgbọ ala dị n'ime mita 4.0. Ihe a chụpụrụ njin ahụ bụ ihe dịka 1.0 lita. N'ihi obere nha, oriri dị ala na ọnụahịa dị ala, obere obere ụgbọ ala kacha mma maka njem.
N'afọ ndị mbụ, ahịa ụlọ na-ere ahịa ka bidoro gbaa ọkụ. Otutu ugbo ala mbu bu obere ugboala, dika Chery QQ, Suzuki Alto, wdg, nke ndi nile maara, na Chevrolet Spark, nke ndi Transformers churu. Ka ọ dị ugbu a, ụgbọ ala ndị a adịghị obere, ma ugbu a obere ụgbọ ala Obere kachasị kwesịrị ịbụ smart.
2, Obere ugbo ala - klas AO
Wheelbase nke klas ụgbọ ala a dị n'etiti mita 2.3 na 2.5, ogologo ahụ ụgbọ ala dị n'etiti mita 4.0 na 4.3, yana mbupu injin nke dị n'etiti lita 1.0 na 1.5.
Dị ka obere ụgbọ ala, obere ụgbọ ala bụkwa ụgbọ ala mbụ nke ọtụtụ mmadụ. Cargbọ mbu nke onye ndezi aha ya bu Kia's Maxima, ugbo ala esiwo na komputa rue obere.
Obere ụgbọ ala anyị bu ụzọ mara bụ VK Polo ama ama ama. N’ezie, mgbe ahịa ahụ mechara ifuru, otu onye na - emekọrịta ihe nwere onye nwere obere ụgbọala ọ na-ere.
Iji maa atụ: Honda Fit, Audi A1, Peugeot 206, Mazda 2, Ford Fiesta, Suzuki Swift, MG3, Hyundai Rena, Nissan Converse, Toyota Vios, To Hyun na ndị ọzọ.
Obere obere ụgbọ ala pere mpe karịa obere Obere-ụgbọ ala, nhazi ya n'ogo ezu oke. Ọbụna ọ gụnyere ụdị ihe yiri nke Mazda 2 na-enye gị ohere inwe ahụmịhe ịnya ụgbọ ala. Mana n'ozuzu ọ ka bụ ụzọ bara uru.
3, ụgbọ ala kọmpat - ụgbọ ala-klas
Wheelbase nke klas ụgbọ ala a dị n'etiti mita 2.5 na 2.7, ogologo ahụ ụgbọ ala dị n'etiti mita 4.2 na 4.6, yana mbupu injin nke dị n'etiti lita 1.6 na 2.0.
Cargbọ ala kọmpat bụ nke kachasị ukwuu n'ụwa, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụghị kọmpat SUV, ahịa ya adịla n'ihu.
Carsgbọ ala kọmpat na-enwekarị ohere, yana afọ ojuju ọtụtụ ndị na njem, yana ibuga ọtụtụ ụgbọ ala etiti na elu-elu, ụgbọala kọmpị abụrụla nhọrọ mbụ maka ọtụtụ ezinụlọ ọhụrụ.
Carsgbọ kọmpat na-ewu ewu karịa n’ụwa. Ọtụtụ ndị na-emepụta ga-ebuga ụdị dị iche iche. Onye ọ bụla maara na: LaVida, Sagitar, Bora, Lingdu, Fu Ruisi, Fox, Ralink, Ling Pai na ndị ọzọ.
4, iumgbọ-ala nke-klas - Klas B
Wheelbase nke klas ụgbọ ala a nwere n'etiti 2.7 na 2.9 mita, ogologo anụ ahụ ụgbọ ala dị n'etiti mita 4.5 na 4.9, na mbupu engine nke dị n'etiti lita 1.8 na 2.4.
Ugbo ala ndi n’enweghi nsogbu n’ogbe ha dum. Carsgbọ ala ndị na-etolite etolite na-abụkarị nhọrọ nke ụlọ ọrụ.
Agbanyeghị, n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ezinụlọ nwere ịhọrọ ugbo ala na-agba agba. O n'ozuzu ya nwere nnukwu ohere na ikike zuru ezu. Ndị na-emepụta ihe na-ejikarị teknụzụ kachasị mma ma ọ kachasị dị elu na-ebute ụzọ n'ime obere ụgbọala.
Okirikiri ụgbọ ala anụ ụlọ nwere mbụ kwuo na "ụgbọ ala nke klaasị nwere ụwa", nke na-akọwapụta nke ọma na ụgbọ ala nke etiti.
Otutu n'ime ugbo ala ndi n’iile na-ere ugbu a n’ụwa abụrụla nke ama ama:
Rozọ azụmaahịa ndị a bụ: Volkswagen Shuangjiao, Magotan na Passat; Japanese atọ kachasị elu, Honda Accord, Nissan Teana, Toyota Camry na ndị ọzọ.
Enwere ụzọ ngagharị: Buick Regal, Chevrolet Mai Rui Bao XL, Mazda Artz, Honda Platinum na ndị ọzọ.
E nwekwara ndị: Ford Mondeo, Peugeot 508, Citroen C5, Hyundai Sonata, Skoda Speed Nawere gabazie.
5, Ọkara na nnukwu ụgbọala - cargbọ C-klas
Wheelbase nke klas ụgbọ ala dị n'etiti 2.8 m na 3.0 m, ogologo anụ ahụ ụgbọ ala dị n'etiti 4.8 m na 5.0 m, na mbupu engine nke ihe karịrị lita 2.4.
The C-klas ụgbọ ala bụ n'ezie ukwuu n'ime maka nhazi na ụgbọ ala azụmahịa. N'ihi na C-Klas nwere ohere karịa ụgbọ ala etiti, yana ọtụtụ n'ụdị mmebe a na-echekarị na azụmahịa. A na-ejikwa ụdị ụgbọ ala C-klaasị mara mma.
Carsgbọ ala C-klas maara onye ọ bụla nọ n'ụwa bụ: Mercedes-Benz E-Class, Audi A6, BMW 5 Series, Volvo 90 Series, Cadillac CT6, XTS, Lexus ES, GS, Toyota Crown, Jaguar XF, Infinitiiti Q70, Volkswagen Huiang, Kia K9 Chere.
6, Nnukwu ụgbọ ala - ụgbọ ala D-klas
Wheelbase nke klas ụgbọ ala nwere ihe karịrị mita 3.0, ogologo oge ahụ ụgbọ ala karịrị mita 5.0, na mbupu ọkụ nke ihe karịrị lita 3.0.
Nnukwu aregbọ ala bụ ụgbọala dị oke egwu nke anyị na-ekwukarị. N'ime afọ ndị mbụ, ụgbọ ala D-klas nwere opekata mpe 6-cylinder ma ọ bụ ọbụlagodi 12-cylinder. Enwetara ya nhazi niile okomoko ị nwere ike ịche n’echiche. Karịsịa maka ndị njem n'azụ, nlekọta ahụ ga-agafe karịa ndị njem n'ihu. Ọnụahịa ahụ karịrị otu nde, nke bụkwa nhọrọ nke ọtụtụ ndị isi na ndị mmadụ na-aga nke ọma.
Carsgbọ ala ndị kachasị ewu ewu bụ BBA kachasị atọ: Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series na Audi A8.
Ndị ọzọ na-ahụkarị bụ Porsche Panamera, Onye isi ala Maserati, Jaguar XJ, Lexus LS, wdg (Bentley, Rolls Royce adịghị n'aka).
Akụkụ bụ isi nke ụgbọ ala buru ibu buru ibu, yana wiil na - amalite site na mita atọ. Nke abuo, nhazi a di oke okomoko. Isi echiche nke ngagharị esighi ike, mana ihe mesiri ike na nkasi obi bu nke a ka e wuliri. N'ihi na ndị nwe ya nke nwere nnukwu ụgbọ ala na-anọdụ ala n'azụ ahịrị.
A na-enweta ọkwa ụgbọ ala site na usoro grading German nke Volkswagen maka ụgbọala. Ọ bụghị ọkọlọtọ nke ikike. Ọ bụ naanị otu ụkpụrụ nke ntụle aka Nana ọha na eze hibere ụzọ maka usoro atụmatụ nke ha, ma mesịa jiri ya mee ihe ebe niile.
Klas ụgbọ ala n'ozuzu ọkwa isii: A00, A0, A, B, C, na D.
Mgbe German Volkswagen malitere ịkwalite atụmatụ ikpo okwu ya, ha kere ụzọ ụgbọ ala ahụ ụzọ isii nke A00, A0, A, B, C na D dabere nha na ọkwá gị.
Dabere na ọkọlọtọ ụgbọ ala German: A00 bụ obere ụgbọ ala ndị njem, A0 bụ obere ụgbọ ala ndị njem A-klas bụ ụgbọ ala na-ebu ndị njem, B-klas bụ ụdị ndị njem na-ebu oke, ụdị C bụ ụdị na-ajụ ase na nke buru ibu. ụgbọ ala, ụgbọ ala D-klas bụ nnukwu ndị njem njem. Ihe omumu ya dabere na paramita dika wheelbase, mbupuru na ibu. Ebere mkpụrụedemede dị ala, ogologo ụgbọ ala nke ụkwụ, na-enwekwu mbughari na ịdị arọ, yana okomoko nke ndị njem. Ọ na-akawanye mma mgbe niile.
A na-akpọkarị A00, A0, A, B, C, na D dị ka ndị obere, obere obere ụgbọala, kọmpụta kọmpụta, obere ụgbọala, ndị na-ajụ oyi na nnukwu ụgbọala, na nnukwu ụgbọala.
Dika onu ogugu ndi n’ile na abawanye na onu ahia, udiri ha, na nhazi ha karie uzo di iche iche, onu ogugu nke Class A, Class B, na Class C ugbo ala ga abawanye. Iji maa atụ, ụfọdụ maydị nwere ike ịnwe oche nke ukwu nke so na A-klas ebe a na-achụpụ ya na ọnụahịa ka nke ndị B-Class. Ya mere, ọkwa ụgbọ ala na-agafe agafe ekwesịghị ịbụ oke aka ike.
Ọkwa, wheelbase (m), ogologo (mita), mbugharị injin (lita), ngwụcha ọka (kilogram)
A00 larịị: 2.00-2.20, erughị 4.00, erughị 1.2, erughị 800
Dsfọdụ ụdị ụgbọ ala mini: Chery QQ3, Suzuki Alto, BYD F0.
A0 larịị: 2.20-2.30, 3.80-4.30, 1.0-1.3, erughị 1000
Smallfọdụ ụdị ụgbọ ala: Volkswagen POLO, Audi A1, Honda Fit, Ford Fiesta, Chevrolet Sail, Hyundai Rena
Klas A: 2.30-2.45, 4.20-4.60, 1.3-1.6, 1100-1400
Dsfọdụ kọmpụta ụgbọ ala kọmpat: Volkswagen LaVida, Skoda Octavia, Sagitar, Toyota Corolla, Buick Excelle, Ford Focus, Hyundai Lang
Klas B: 2.45-2.60, 4.50-5.00, 1.6-2.4, 1400-1800
Dsfọdụ ụdị ụgbọ ala dị n'etiti: Audi A4, Volkswagen Passat, Hyundai Sonata, Peugeot 508, Honda Accord, BMW 3 Series, Ford Mondeo, Toyota Camry.
Klas C: 2.60-2.80, 4.70-5.00, 2.3-3.0, 1600-2000
Akụkụ nke ọkara na nnukwu:
Audi A6, BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Series, Toyota Crown.
D ọkwa, 2.80 ma ọ bụ karịa, karie 5.00, ukwuu karịa 3.0, 1800 ma ọ bụ karịa
Akụkụ nke nnukwu: Audi A8, Mercedes-Benz S, BMW 7, Lexus LS.
Pịa ma Zụta zuru ụwa ọnụ onye na-echekwa ihuenyo ụgbọ ala